SPC ကြမ်းပြင်ဖော်မြူလာ၏အကျဉ်းချုပ် - ZD ကြမ်းပြင်ကျွမ်းကျင်သူ
နေအိမ် > SPC ကြမ်းပြင်ဖော်မြူလာ၏အကျဉ်းချုပ်
Edit ကို: Denny　2020-06-05　မိုဘိုင်း
PVC ဗဓေလသစ်အမှုန့်, ကျောက်မှုန့်, ပလပ်စတစ်, stabilizer, ကာဗွန်အနက်ရောင်, အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို polyvinyl ကလိုရိုက်နှင့်ကျောက်အမှုန့်ဖြစ်ကြသည်။
ပလပ်စတစ်ကြမ်းပြင်သည်အောက်ခံမှမျက်နှာပြင်အနေဖြင့် PVC အလွှာအရောင်အသွေးစုံလင်သောစက္ကူ၊ wear -proof layer နှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ကျောက်တုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပလပ်စတစ်ကြမ်းခင်း SPC သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုအမျိုးအစားသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သုည formaldehyde ၏အရည်အသွေး၊ အနာမှကာကွယ်မှု၊ အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ခြင်း၊
SPC ကြမ်းပြင်သည် PVC အလွှာကိုထုတ်ယူရန် T-shaped သေတ္တာများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ PVC wear ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အလွှာ၊ PVC အရောင်များနှင့် PVC အလွှာများနှင့်အပူနှင့်သစ်သားတို့သီးခြားစီသီးခြားလျှောက်ထားရန်သုံးကြိတ်သို့မဟုတ်လေး roller calender ကိုအသုံးပြုသည်။ , ထိုဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းပါသည်, မထိုက်မတန်အပူအားဖြင့်ပြုသောအမှု, နှင့်မျှမကော်လိုအပ်ပါသည်။
SPC ကြမ်းပြင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဖော်မြူလာများကိုအသုံးပြုသည်။ လေးသောသတ္တုများ၊ ဖthalatesနှင့် methanol ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောအရာများမပါ ၀ င်ပါ။ EN14372, EN649-2011, IEC62321 နှင့် GB4085-83 စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဥရောပနှင့်အမေရိကရှိဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့်အာရှ - ပစိဖိတ်စျေးကွက်များတွင်လူကြိုက်များသည်။ ၎င်း၏ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုတို့ကြောင့်ကျောက် - ပလပ်စတစ်ကြမ်းခင်းသည်အစိုင်အခဲသစ်သားကြမ်းပြင်၏အစိုဓာတ်နှင့်ပုံသဏ္deာန်ကိုပြေလည်စေရုံသာမကအခြားအလှဆင်ပစ္စည်းများ၏ formaldehyde ပြproblemနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးသည်။
ရွေးချယ်ရန်ပုံစံများ၊ မိုးလုံလေလုံအလှဆင်ခြင်း၊ ဟိုတယ်များ၊ ဆေးရုံများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့်အခြားအများသုံးနေရာများအတွက်သင့်လျော်သည်
SPC ကြမ်းပြင်ကျုံ့ခြင်း: ≤1‰ (ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက်), .52.5 ‰ (ဆေးကုသမှုမခံယူမီ)၊ (ကျုံ့စစ်ဆေးမှုစံသတ်မှတ်ချက် - ၈၀ ℃၊ ၆ နာရီစံ);
SPC ကြမ်းခင်းသိပ်သည်းဆ - ၁.၉ ~ ၂ တန် / ကုဗမီတာ၊
SPC ကြမ်းပြင်အားသာချက်များ - SPC ကြမ်းပြင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများသည်တည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးဓာတုညွှန်ကိန်းများသည်နိုင်ငံတကာနှင့်အမျိုးသားအဆင့်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
SPC ကြမ်းပြင်၏အားနည်းချက်များ SPC ကြမ်းပြင်သည်သိပ်သည်းမှု၊ လေးလံသောအလေးချိန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားပါသည်။
LVT နှင့် WPC ကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် SPC ကြမ်းခင်းထုတ်လုပ်မှု - SPC ကြမ်းခင်းပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
လုပ်ငန်းစဉ် - ၁။ ရောစပ်ခြင်း
ကုန်ကြမ်းများအချိုးအရအလိုအလျောက်တိုင်းတာမှု→မြန်နှုန်းမြင့်ရောနှောခြင်းနှင့်အတူပူရောစပ်ခြင်း (အပူရောစပ်အပူချိန် - ၁၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ အရာ ၀ တ္ထုများအတွင်းရှိအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်တစ်မျိုးတည်းသောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုရောနှောရန်ဖြစ်သည်) →အအေးရောနှောခြင်းကိုရိုက်ထည့်ပါ (အအေးခံပါ။ အပူချိန်ရောစပ်ခြင်း - ၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ →အအေးခံပစ္စည်းများဖြင့်အအေးခံပါ။
လုပ်ငန်းစဉ် 2: extrusion
အပူနှင့် extrusion အတွက် twin-screw နှစ်ခု extruder ကိုဆက်သွယ်ပါ→ extrusion မှိုများအတွက်စာရွက်သေခေါင်းကိုရိုက်ထည့်ပါ, ဖွဲ့စည်းထားသောစာရွက်လေးလိပ်ပြက္ခဒိန်ဖြတ်သန်းနှင့်အလတ်ပစ္စည်းအထူ→ Paste အရောင်ရုပ်ရှင်→ငါးပိ wear အလွှာ→အအေး→ဖြတ်တောက်ခြင်း;
လုပ်ငန်းစဉ် 3: ခရမ်းလွန် tempering
Surface UV →အပူချိန် (80 ~ 120 ℃ ~; ရေအေးအပူချိန်: 10 ℃) ။
လုပ်ငန်းစဉ် ၄ - ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း
ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း→ထုပ်ပိုးခြင်း
ဘုံပြproblemsနာများ - ဆင်းရဲသားထုတ်ကုန်ပုံ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
1. ထုတ်ကုန်အရွယ်အစားမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, မှိုအပြည့်အဝမဖြစ်, မြို့ရိုးအထူမညီမညာဖြစ်နေသော။
အကြောင်းပြချက်များ - ပုံသေနည်းကိုမဆင်ခြင်နိုင်သည့်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပချောဆီအရည်ကြည်မှု၊ မတည်ငြိမ်သောအရေအတွက်အစာကျွေးခြင်းမြန်နှုန်း၊
ဖြေရှင်းချက် - အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပစလစ်ပစ္စည်းများ၏အချိုးအစားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ မှန်ကန်သောနို့တိုက်ကျွေးမှုကျရှုံးခြင်း၊ စည်နှင့်ဝက်အူနေရာတွင်အစားထိုးပါ။
2. ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည်မညီမညာဖြစ်နေခြင်း၊ အရောင်သွေဖည်ခြင်းထင်ရှားသည်၊ မျက်နှာပြင်တွင်ငါးအကြေးခွံမမှန်၊ ထုတ်ကုန်၏စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ မာကျောမှုအားနည်းခြင်း၊
အကြောင်းပြချက် - ဖော်မြူလာ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်မဆင်ခြင်နိုင်ပါ၊ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်များပြည့် ၀ စွာဖြည့်တင်းလွန်း။ ပလပ်စတစ်ဆေးကြောနိုင်မှုနည်းသောကြောင့်သက်ရောက်မှုပစ္စည်းပမာဏမလုံလောက်ပါ။
ဖြေရှင်းချက် - ဖော်မြူလာဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်ပါ၊ အော်ဂဲနစ်ဖြည့်သည့်အရာများ၏ပါဝင်မှုကိုသင့်လျော်စွာလျှော့ချပါ၊ ပစ္စည်း၏ပလပ်စတစ်ကို ၆၅% အထိပြင်ဆင်ပါ။
၃။ ချောထုတ်ကုန်၏ထွက်ရှိမှုကွေး၊ ပုံပျက်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျသွားသည်။
အကြောင်းမရှိ: စက် ဦး ခေါင်းနှင့်ပုံဖော်သေအတူတူလေယာဉ်ပေါ်မရှိကြ, extrusion မြန်နှုန်းအလွန်မြန်သည်, ရေအေး၏အပူချိန်အလွန်မြင့်မားသည်, ရေဖိအားလွန်းသေးငယ်သည်, ရေစီးဆင်းမှုမလုံလောက်သည်, ရေနှင့်ဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းချောမွေ့သည်မဟုတ်, လေဟာနယ်အနုတ်လက္ခဏာဖိအားမလုံလောကျ;
ဖြေရှင်းချက် - ခေါင်းကိုသေပြီးဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကိုအတူတူအဆင့်မှာထားပါ၊ extrusion speed ကိုလျှော့ချပြီးရေအပူချိန်ကိုအေးစေတယ်၊ ရေဖိအားနဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုတိုးစေတယ်၊ ဘုံပြproblemsနာများ - ဆင်းရဲသားထုတ်ကုန်ပုံ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဖြေရှင်းချက် - ခေါင်းကိုသေပြီးဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကိုအတူတူအဆင့်မှာထားပါ၊ extrusion speed ကိုလျှော့ချပြီးရေအပူချိန်ကိုအေးစေတယ်၊ ရေဖိအားနဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုတိုးစေတယ်၊
SPC ကြမ်းပြင်ဖော်မြူလာ၏အကျဉ်းချုပ် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ